Oovimba abagciniweyo be-GBPAUD
I-GBPAUD yaphuka ngephethini yokuqhubeka
Inkxaso ephambili: 1.8900
Inkcaso ephambili: 1.9000
I-GBPAUD ibijikeleze nzima ukusukela nge-21 ngoSeptemba ukuya kuthi ga namhlanje. Oku kube kukuhamba kwe-2.08% (i-385 pips) ngaphandle kokutsala okunzulu kwaye ngendlela eyakheke kakuhle.
Iwahloniphile onke amanqanaba kwisiseko sokuphinda-phinda kwaye kudala izakhiwo eziqhubekekayo ezihamba apha endleleni.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ixabiso liye lavavanya inqanaba elilandelayo lokuchasana kunye nenombolo enkulu kakhulu yengqondo, inqanaba le-1.8900. Eli likwelona nqanaba libalulekileyo elibone abadlali abakhulu betsibela macala omabini ngo-Agasti.
Emva kokwenza enye ipateni yokuqhubeka, nditsiba ixesha elide kolu phumlo kuvavanyo lwenqanaba lesitshixo elilandelayo.
Iphethini yokugqibela yokuqhubekeka kwexabiso elibone ukuhamba kwepayipi eyi-111 ekwangumgama ofanayo ukusuka ekuphumeni ukuya kwiithagethi zam.